J: Technology - EIFO not UFO
ကိုယ်ပျံလာပြီ .... ရွှေနွယ်ရိုးဆီ ......
့မင်းနန်ဒါလို ရေပြင်မှာ ခရီးမနှင်ပါဘု ဝေဟင်ကနေ ညင်သာစွာသက်ဆင်းလိုက်မယ်.
ကဲပု၈ံပြားပျံတဲ့ဟေ့ ..အဲ.. မှားလို့ မိုးကျရွှေကိုယ်တဲ့ ဟေ့.
Earth Identified Flying Object (EIFO )
မော်တော်ကားအသေးစားအရွယ် ပုဂံပြားပျံပုံစံ လေယာဉ်တမျိုးကို အမေရိကန် မိုလာအင်တာနေရှင်နယ် ကုမဏီမှ တည်ထွင်ပြီးကြောင်း၊ ၄င်းယာဉ်မှ အပေါ်အောက် ရေပြင်ညီအတိုင်း တက်ဆင်းနိုင်သဖြင့် ယာဉ်ပြေးလမ်းမလိုအပ်ကြောင်း၊ အရှိန် တနာရီလျှင် ၅၀မိုင်ကျော် မောင်းနိုင်ကြောင်း၊ အမြင့် ၁၀မီတာ ကျော်ထိ စက်အားဖြင့်တက်နိုင်သည့် အပြင် လေထုဖိအားကြောင့် ယာဉ်သည် ၁၀မီတာ ထက် ပိုမြင့်စွာ ပျံတက်နိုင်ကြောင်း၊ လောင်စာဆီဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း၊ လူ၂ဦးထက်ပိုမတင်နိုင်သဖြင့် ၀ယ်သူအများ သဘောကျ ကြကြောင်း၊ လမ်းပန်းခက်ခဲသော နေရာများတွင် နယ်စပ် နေရာများ တွင် ဒေသ စစ်ဆေးခြင်း၊ အိမ်ခေါင်မိုး ပြင်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးခုတ်ထွင်ရန်၊ လွန်စွာ အသုံးဝင်ပါသည်။
တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ၁သိန်း၃သောင်းခန့် သာရှိပြီး အစီးရေ ၂၀၀ မျှသာ ရှိကြောင်း ၀ယ်လိုသူ များ စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။
A flying saucer which glides up to 10 meters height from ground with two persons is invented by US company Moller International.
It is built with eight engines and can reach 50mph vertically and horizontally with noise free. It is the size of the small car and cost for US$130,000.
“It's notahovercraft, although its operation is just as easy," he added. "You can speed over rocks, swampland, fences, or log-infested waterways with ease because you're not limited by the surface."
Ref: The Dailymail, UK.4August 2007
Hovercraft ပါပဲဗျ။ အပေါ်ကိုအတော်ရောက်မှ ကြိုးနဲ့ထိမ်းထားတာ။